हङकङका नागरिक भित्र्याउन आवेदन खुलाउँदै बेलायत – Sandesh Munch
हङकङका नागरिक भित्र्याउन आवेदन खुलाउँदै बेलायत
July 24, 2020 71
लण्डन : बेलायतले हङकङका नागरिकहरुका लागि नागरिकता लिन विशेष आवेदन खुलाउँदैछ ।
‘यूके र हङकङका जनताबीच बलियो ऐतिहासिक सम्बन्ध छ । र हामी उनीहरुको स्वतन्त्रताको पक्षमा बोलेको बाचा पूरा गर्छौँ,’ बेलायती गृहमन्त्री प्रिती पटेलले बताएकी छन् । हङकङका नागरिकका लागि बेलायतले ल्याएको नयाँ नीति अनुसार नयाँ प्याकेज मार्फत बेलायत आउने हङकङका नागरिकले बेलायतमा ५ वर्ष बसेपछि स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिन पाउनेछन् । त्यसपछि थप १२ महिनापछि उनीहरुले ब्रिटिश नागरिकताको लागि आवेदन दिन पाउनेछन् ।
Prevकम्प्युटर अपरेटर १६ लाख घुससहित पक्राउ
Nextडाक्टरमा कोरोना भेटिएपछि अस्पताल सिल
हवाई उडान जेठ मसान्तसम्म बन्द
आजदेखि फोन गर्दा पैसा लाग्दैन ! जिरो ब्यालेन्समा फेसबुक चलाउन र युट्युब हेर्न पनि मिल्ने (81036)
दुखद समाचार ! आखिर किन गरे त पारसले आत्मा हत्या ? (25635)
अमेरिकामा कोभिड-१९ को खोप वितरण गर्न सेना परिचालन गरिँदै (10876)
खुशीको खबर! बल्ल कोरना भाइरसको औषधी चीनले नै पत्ता लगायो ! (9242)